အင်းလျားကန်ဘောင်တွင် အလှဆင်ထားသော ပုသိမ်ထီးများအား ဖြုတ်ယူမှုဖြစ်ပွား - Real Gaming Myanmar
By thant naing /2months ago / Up to Date News / No Comments
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ကာလအချိန်ရောက်လာချိန်မှာ ပြည်လမ်းရှိ အင်းလျားကန်ဘောင်ကို အလှဆင်ဖန်တီးလေ့ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မှာလည်း ရန်ကုန်မြို့မှာ ပထမဆုံးပြုလုပ်တဲ့ လမ်းလျှောက်သင်္ကြန်အပြင် အင်းလျားကန်ဘောင်မှာလည်း အတာနှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ ပုသိမ်ထီးများဖြင့် လျှောက်လမ်းကို အလှဆင်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် …. ။
ယနေ့ သင်္ကြန် အကြတ်နေ့မှာတော့ ထိုအလှဆင်ဖန်တီးထားတဲ့ ပုသိမ်ထီးများကို လာရောက်လည်ပတ်သူများက ထီးများဖြုတ်ယူမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ဟာ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့ သင်္ကြန်ကာလပြီးဆုံးဖို့ တစ်ရက်တာလိုနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုမျိုးအကျည်းတန်သော လုပ်ရပ်များဟာ လူမှုကွန်ယက်အသုံးပြုသူများကြား ပျံ့နှံ့နေပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် …. ။
ထီးများဖြုတ်ယူနေတဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်း လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ အသုံးပြုသူတစ်ဦးက မျဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ မြို့တော်ရဲ့သာယာလှပမှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ အသွင်ဆောင်တဲ့ ထိုလုပ်ရပ်တွေကိုတော့ အများပြည်သူအချို့က ရှုံ့ချကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ် …. ။
Photos-Pyae Phyo Naing
နှဈစဉျနှဈတိုငျး သင်ျကွနျကာလအခြိနျရောကျလာခြိနျမှာ ပွညျလမျးရှိ အငျးလြားကနျဘောငျကို အလှဆငျဖနျတီးလရှေိ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီနှဈမှာလညျး ရနျကုနျမွို့မှာ ပထမဆုံးပွုလုပျတဲ့ လမျးလြှောကျသင်ျကွနျအပွငျ အငျးလြားကနျဘောငျမှာလညျး အတာနှဈသဈကို ကွိုဆိုတဲ့အနနေဲ့ ပုသိမျထီးမြားဖွငျ့ လြှောကျလမျးကို အလှဆငျဖနျတီးထားတာဖွဈပါတယျ …. ။
ယနေ့ သင်ျကွနျ အကွတျနမှေ့ာတော့ ထိုအလှဆငျဖနျတီးထားတဲ့ ပုသိမျထီးမြားကို လာရောကျလညျပတျသူမြားက ထီးမြားဖွုတျယူမှုတှဖွေဈပှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒီကနဟေ့ာ သင်ျကွနျအကွတျနဖွေ့ဈပွီးတော့ သင်ျကွနျကာလပွီးဆုံးဖို့ တဈရကျတာလိုနသေေးတာဖွဈပါတယျ။ ယခုလိုမြိုးအကညျြးတနျသော လုပျရပျမြားဟာ လူမှုကှနျယကျအသုံးပွုသူမြားကွား ပြံ့နှံ့နပွေီးတော့ ဝဖေနျမှုတှထှေကျပျေါနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ …. ။
ထီးမြားဖွုတျယူနတေဲ့ဗီဒီယိုကိုလညျး လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာထကျမှာ အသုံးပွုသူတဈဦးက မဝြထေားတာတှရေ့ပါတယျ။ မွို့တျောရဲ့သာယာလှပမှုကို ထိခိုကျစတေဲ့ အသှငျဆောငျတဲ့ ထိုလုပျရပျတှကေိုတော့ အမြားပွညျသူအခြို့က ရှုံ့ခကြနျ့ကှကျမှုတှရှေိနခေဲ့ပါတယျ …. ။
Previous: သင်္ကြန်ရေကစားလို့ ဖခင်က သမီးကို ရိုက်မိရာ သမီးသေဆုံး
Next: သင်္ကြန် ၂ ရက်အတွင်း ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အခြေအနေ